တနင်္လာနေ့တွင် IMM မှ Haydarpasa တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း! | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်တနင်္လာနေ့တွင် IMM မှ Haydarpasa တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း!
20 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခြင်းအတွက် TCDD ၏သမိုင်းဝင်Haydarpaşaနှင့် Sirkeci မီးရထားဘူတာရုံ၏ဂိုဒေါင်များအားချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် IBB သည်လေကြောင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်တရားမ ၀ င်ဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရသောOkçularဖောင်ဒေးရှင်း၏ယခင်အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်သည့် 15 နှစ်ပတ်လည် Hezarfen Consultancy Limited ကုမ္ပဏီ၏ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာဖြစ်သည့်2ထောင်ပေါင်းများစွာ ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာတင်ဒါတင်ဒါပြီးတဲ့နောက် 10 နေ့ကတိုးလာတယ်။ တင်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ရန် IMM သည်တနင်္လာနေ့ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးသို့လျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ Anatolian Courthouse တွင်ရှိသောလူများနှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားချက်ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
SözcüÖzlemGüvemli၏အစီရင်ခံစာအရ၊ Haydarpasa မီးရထားဘူတာကိုတင်ဒါခေါ်ယူရန် Istanbul Metropolitan Municipality သည်တနင်္လာနေ့တွင်ရွေ့လျားနေသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းကိုတရားမ ၀ င်ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုအယူခံဝင်ရန် IMM သည်တနင်္လာနေ့ (အောက်တိုဘာ 21) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့အယူခံဝင်မည်။ Anatolian Courthouse တွင်ရှိသောလူများနှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားချက်ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
IMM Sözcüတင်ဒါဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လျှောက်ထားမည်ဟု 09.30'da ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးမှတနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ Ongun, 11.30'da Anadolu Courthouse တွင်ရှေ့နေများကိုထောက်ခံခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါအတွက်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် 29 နှစ်ချုပ်စာအုပ်အတွက်သမိုင်းဝင်Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာများရှိ 15 စတုရန်းမီတာထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေရာလွတ်များကို4ငှားရမ်းရန်အတွက် TCDD သည် 2019 အောက်တိုဘာလတွင်4တင်ဒါစတင်ခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနသည်ıcıအဟန့်အတားဟုယူဆသော tender နှင့် IMM ၏ပါ ၀ င်မှုကိုပယ်ချခဲ့သည်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိOkçularဖောင်ဒေးရှင်း၏အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်သူHüseyin Avni Önderယခင် IMM ၀ န်ထမ်း 33 မှပိုင်ဆိုင်သည့် Hezarfen Consultancy Limited ကုမ္ပဏီနှင့်İBBKültür A.Ş. -İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş. လုပ်ငန်းစု။
TCDD မှခန့်မှန်းထားသည့်လစဉ်ငှားရမ်းခတန်ဖိုးအား 30 миң TL အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်တင်ဒါတွင် Hezarfen Consulting သည် 10 ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် 300 တစ်ထောင်လစဉ်ငှားရမ်းခြင်းများရှိသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်များကိုကြေငြာပြီးနောက် 15 သည်ပါတီများအားတစ်နေ့တာအတွင်းညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တင်ဒါကော်မရှင်အနေဖြင့်ပါတီများအားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်းတင်ဒါကော်မရှင်သည်အောက်တိုဘာ 18 တွင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး IMM ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမခံရသေးကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အားစာဖြင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ တင်ဒါတစ်ခုတည်းသို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည့် Hezarfen Consulting သည်ပမာဏအားပေါင်ထောင်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲများ၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာဖြစ်သော Hezarfen Consulting သည်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီကုမ္ပဏီကိုHüseyin Avni Önderကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသြဂုတ်လ3မှာ IMM ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနမှာအလုပ်ထွက်ခဲ့ပြီး 2015 ထောင်ပေါင်းများစွာ TL ၏မြို့တော်မှာအလုပ်ထွက်ခဲ့တယ်။
Önderသည် 2018 မတိုင်မီအထိ Archers Foundation ၏အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်လေလံတင်ပြီးနောက် 350 ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာလေလံတင်ပြီးနောက် 15 ၏သမိုင်းဝင်ဘူတာရုံရှိကုမ္ပဏီ၏သိုလှောင်ရုံများကိုနှစ်စဉ်ငှားရမ်းရန်အတွက်လစဉ် 10 ပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာလဲလှယ်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏မှတ်တမ်းများအရ Hezarfen Consulting သည်အောက်တိုဘာ4တွင်တင်ဒါတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အထွေထွေညီလာခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 1 တင်ဒါပြီးနောက်5နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်9Istanbul ။ အများပြည်သူတစ် ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့်လက်မှတ်ရ။
အောက်တိုဘာ 14 တွင်ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီးတိုးမြှင့်လက်မှတ်များကို Istanbul Trade Trade Registry Office မှမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ 2019 ပေါင်ပေါင်အရင်းအနှီး၊ 10 အကြိမ်ဟာ 100 ပေါင်သန်းတိုးလာခြင်းအားဖြင့်တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏မတည်ငွေရင်းတိုးမြှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်အောက်တိုဘာ 18 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းစာ၏ကြော်ငြာများအရHüseyin Avni Önderသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကြွေးမြီပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသူ၏ကုမ္ပဏီထံအပ်နှံခြင်းအားဖြင့်အရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သူကကျန်နှစ်နှစ်အတွင်းပေးချေရန်ကတိပြုခဲ့သည်။
သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ“ ကုမ္ပဏီ၏မြို့တော်မှာ 25,00 သန်း TL ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 40 Turkish Lira တန်ဖိုးရှိ 1 တစ်ထောင်ခွဲခြားထားသည်။ ဒီမြို့တော်ရဲ့ဖြန့်ဝေသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:
Hüseyin Avni Önder: 25 million TL သည်တူရကီ Lira ၏အစုရှယ်ယာတစ်ထောင်နှင့်ညီမျှသော TL သည်ပူးပေါင်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်အပြည့်အဝကတိပြုထားပါသည်။ မြို့တော်ဟောင်းအားလုံးပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် TL 40 တိုးပွားလာသောအရင်းအနှီးထောင်ပေါင်းများစွာသည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အကြွေးမှပေးဆပ်ရသည်။ 1 အောက်တိုဘာ 770 ရက်စွဲ -9/ 2019, မြို့တော်ကိုငွေပေးချေသည့်အခါ, ရှယ်ယာရှင်များမှပေးဆောင် 2019 အောက်တိုဘာလ 110 ရက်စွဲ -9 / 2019 ။ ကျန်ရှိသောကတိပြုထားသောရှယ်ယာများကို 2019 လအတွင်းပေးချေလိမ့်မည်။ ”
BBB ဥက္ကEk္ဌ Ekrem amomamoğluကHaydarpaşaနှင့် Sirkeci တင်ဒါမှ affiliBB တွဲဖက်မှုများကိုတရားမ ၀ င်ဖျက်သိမ်းမှုအပေါ်ပြင်းထန်စွာတုန့်ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။ 16 ကလူသန်းပေါင်းများစွာကဒီအတွက်ငါ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။3ပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာအထိ IMM မှလစာရရှိသောမိသားစုဝင်များမှပိုင်ဆိုင်သောဖောင်ဒေးရှင်းဒါရိုက်တာတစ် ဦး အားပေးကမ်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဘယ်နည်း။ ဤလှုံ့ဆော်မှုသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အခြားနေရာများသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ သူ့အတွက်အခွင့်အရေးကိုငါတို့အသုံးချမယ်။ Imamoglu ကသူသည်အစ္စတန်ဘူလ်ကိုယ်စားအလွန်ဒေါသထွက်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ de အများပြည်သူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်မည်သို့ကျင့်ဝတ်ပြုမူပုံကိုမသိသောသူများသည်နိုင်ငံတော်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတစ်စုံတစ် ဦး ထံဆွဲ တင်၍ မနက်ဖြန်သည်အခြားအရာများကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ဒါကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး
2 က“ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သိပ္ပံထောင်နှင့်ချီသောကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိသည်။ PTT၊ TCDD၊ Beyoğluမြူနီစီပယ်၊ ဖောင်ဒေးရှင်းမှပါ ၀ င်ခြင်း၊ Okçularဖောင်ဒေးရှင်း၊ Türk Telekom၊ တူရကီလေကြောင်းလိုင်း၊ TRT၊ Halkbank၊ , Borsa İstanbul, Anadolu အေဂျင်စီ။
IMM မှHaydarpaşaနှင့် Sirkeci station ၏တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုကန့်ကွက်ခြင်း 14 / 10 / 2019 darBB သည်Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာနှင့် BB ရှိနေရာအချို့ကိုငှားရန် TCDD ကပြုလုပ်သောလေလံပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ကန့်ကွက်နောက်ဆုံး Cable ကိုကားအတားအဆီး 21 / 03 / 2012 14 သန်း 400 တစ်သိန်း TL ဖြင့်အမြင့်ဆုံးလေလံဆွဲခဲ့သော Doppelmayr Seilbahnen Gmbh သည်ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလက Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ကေဘယ်လ်ကားတင်ဒါကိုအယူခံဝင်ခဲ့သည်။ တင်ဒါ၊ 10 သန်း 225 lira …
GCC Erkan Demirtas သည့် Metro စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာလုံခြုံရေးစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြမဟုတ်ခဲ့ Metro စျေးပြိုင် Tools များရန်တူရကီရဲ့ကန့်ကွက် 23 / 07 / 2012 နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌လူတစ် ဦး သေဆုံးခဲ့ရသောအလုပ်မတော်တဆမှုတစ်ခုနှင့်အတူအစီအစဉ်သို့လာသည့် Ankara Metro နှင့်ဆွေးနွေးမှုအဆုံးသတ်သွားခြင်းမရှိပါ။ Metro စီမံကိန်း၏အရေးကြီးဆုံးသောအချက်အချာတစ်ခုမှာ 400 သည်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသော 324 မြေအောက်ရထား ၀ ယ်ရန်တင်ဒါတင်ဒါဖြစ်သည်။
Kocaeli လမ်းရထားနူးညံ့မှကန့်ကွက် 15 / 06 / 2015 Kocaeli Tram တင်ဒါတင်သွင်းမှုကိုကန့်ကွက်ခြင်း - မြွေ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောင်းလဲစေသော Kocaeli Metropolitan Municipality ၏လမ်းရထားတင်ဒါအားမေလတွင်ကျင်းပခဲ့သော Seka Park Hotel တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
Polatlı - လိုင်းကင်မရာစနစ်တည်ထောင်စီမံကိန်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအယူခံဖြတ်တောက်ခြင်း Konya YHT 26 / 05 / 2016 TCDD Polatlı - Konya YHT လိုင်းဖြတ်ကင်မရာစနစ်စီမံကိန်း KIK သည်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းကိုကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ 30 ဇန်နဝါရီလ 2015 လေလံ၊ 2014 / 136994 GCC တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှပယ်ချခဲ့သည်။
IMM မှHaydarpaşaနှင့် Sirkeci station ၏တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုကန့်ကွက်ခြင်း
ကန့်ကွက်နောက်ဆုံး Cable ကိုကားအတားအဆီး
GCC Erkan Demirtas သည့် Metro စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာလုံခြုံရေးစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြမဟုတ်ခဲ့ Metro စျေးပြိုင် Tools များရန်တူရကီရဲ့ကန့်ကွက်
အတူတကွတူရကီဝင်လာသောဗြိတိန်မီးရထားကဏ္ဍကုန်သွယ်ရေးမစ်ရှင်သည်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအနာဂတ်၏တနင်္လာနေ့ Aso အဖွဲ့ဝင်။
တနင်္လာနေ့ခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်း Interchange ၏ Inegol OSB အခြေခံ
IETT နေ့တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 17 ဆောင်းရာသီဇယားရှုံးရလိမ့်မည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (321) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)